Tuesday February 12, 2019 - 13:38:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka sare ee ciidamada soo duulayaasha AMISOM ayaa shir lagu sheegay xasaasi ku leh xerada Xalane ee duleedka magaalada Muqdisho oo ay saldhigga ugu weyn oo ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya.
Dhammaan Taliyaasha ciidamada iyo madaxda Midowga Afrika ee qaabilsan duullaanka lagusoo qaaday dalka ayaa ku sugan madasha shirkan oo ujeedkiisa ugu muhiimsan uu yahay dajinta qorshe kama dambeys ah sidii ciidamada AMISOM looga saari lahaay Soomaaliya.
Simon Mulongo oo ah ku xigeenka Wakiilka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa taliyaasha shirsan ka hor sheegay in kulanka laga filayo in lagu gaaro go’aammo leysku haleyn karo oo ku aaddan wadiiqo hagaagsan loo dajiyo qaabka bixitaanka ciidamada Soomaaliya ku sugan.
Mas'uuliyiinta Ururka Midowga Afrika waxay sheegeen in dib udhac uu ku yimid howlgalladoodi ka socday dalka Soomaaliya balse ay hadda xoogga saari doonaan in hanaan mideysan loo dajiyo sidii ciidamada looga saari lahaay Soomaaliya.
Shirka ka furmay xerada Xalane oo socan doono muddo 4 maalmood ah go'aamada kasoo bixi doona midkiisa ugu horreeya ee ay tahay in lafulo waa in kun askari oo dowladda Burundi katirsan lagasoo saaro gobolka Shabeelaha dhexe.
Tigabu Yilma Wondimhunegn oo ah taliyaha ciidamada AMISOM kanasoo jeeda dowladda Itoobiya ayaa madasha ka sheegay in qorshayaal adag ay horyaallaan waxaana ugu horreeya weerarada uga imaanaya Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa wax ka badan 12 sanadood duullaan gardarra ah ku jooga dalka Soomaaliya balse sedaxdii sanadood ee lasoo dhaafay ayay lakulmayaan dib udhac ballaaran kadib markii ay xoogaga Al Shabaab ku dhiig bixiyeen dagaalka loo yaqaan ku dhufo oo ka dhaqaaq.